“Hadalka Gudiga Xaqiiqo Raadinta ee IGAD waa sumad madow oo dalka ku taal” - Wasiir Dubbe - AxadleTM
Senior leaders consult with UPDF troops in Mogadishu in the course of the Al-Shabaab…
list seizure of 17 tonnes of hashish resin through
Northeastern State of Somaliadeclares struggle on terrorist teams after reformatory…
Jabuuti oo heshay tallaalka coronavirus. – AxadleTM
Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlay Siyaasadda, Khilaafka & Abaarta
“Hadalka Gudiga Xaqiiqo Raadinta ee IGAD waa sumad madow oo dalka ku taal” – Wasiir Dubbe – AxadleTM
Wasiirka warfaafinta xukuumada Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay warbixintii guddiga dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Kenya, qiimeyntooda iyo jawaabta dowladda.
Abuukar Osman dubbe Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya wuxuu sheegay in qiimeynta hantidhawrka iyo mas’uuliyiinta gobolka iyo baarka madow lagu sameeyay bandhig ay xalalka macluumaadka ee xaqiiqda ku wajahan looga dabatago.
Wasiir Cismaan ayaa sheegay in Soomaaliya ay soo dhaweyneyso magacaabista guddi ay hogaamineyso Dowlada Jabuuti oo ay ku noolyihiin tirada ugu badan, si ay u soo ogaadaan xaqiiqda khilaafka ka dhex jira labada dowladood.
“Warkaas wuxuu naxdin ku noqday dowladda Soomaaliya. Waxaa ku qoran sheegashada Soomaaliya waa mid khaldan, in ciidamada Kenya aysan imaan Soomaaliya iyo in sheegashada dowladda Soomaaliya ay tahay mid aan sal iyo raad lahayn. Kana baxsan deegaanadooda, gaar ahaan gobolka Gedo” ayuu yiri Cismaan Abuukar Dubbe.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in go’aanka guddiga uu bar madow ku yahay Soomaaliya, maadaama laga filaayay in soo jeedintooda ay ku filnaan doonto, sida uu sheegay wasiir Cismaan Abuukar Dubbe.
Wuxuu ku eedeeyay guddiga inay yihiin hal dhinac, kadib markii kaliya warbixin xaqiiqo raadin ah ay ka timid wasiirka gaashaandhiga Kenya Monica Juma, halka ay diiday inay u timaado Soomaaliya si ay u raadsato wax ka qabasho sida uu hadalka u dhigay.
axadle 9046 posts
Sergio Ramos iyo Lucas Vazquez oo shandadahooda ku jira
Election in CAR: “there changed into an awfully broad